Cali Yufus Xoosh iyo Gaas. (Lud hore laqanyadeed) – Radio
January 2, 2019	200	1
Gaalkacyo ( Codka Nabadda) Cabdiwali Gaas oo booqasho ku maraya Gabalada Puntland ayaa waxaa dhibsaday oo sharaystay booqashadaas Xukuumaddii Faroole,Cabdiwali markaas wax Xil ah ma haynin,Lakin wuxuu ahaa Raysul Wasaare hore oo soo booqday dadkuu matalayay.
Safar Jidka ah ayuu Galkacayo ka bilaabay, Wuxuu ugu dambays gaaray magaalada Boosaaso,wuxu degay Liiban Boqor guri uu kuleeyahay Bosaso.
Galab ayay soo galeen Bosaso, Cabdiwali wuudaalanaa xoogaa ayuu seexday, Wuxuu kusoo kacay Adinkii Makhribka,oo guriguu daganaa Ciidan ad u Xoogbadan la dul dhigay waa Ciidanka PMPF ta.
Wuxuu Wacay Cali Yusuf Xoosh oo markaas ahaa wasiir ku xigeenka arimaha Gudaha Puntland,Cali Waa Oday Siyaasiya oo Rug Cadaaya oo dadka ad u kala yaqaan, Xukuumadda Faroole-na kamida tiirarka ay ku taagan tahay markaas ee Aaran Jaan.
Cabdiwali Wuxuu way diiyay Cali Sababta dawladu Ciidanka usoo duldhigtay?
Cali Wuxuu ku Jawaabay Cabdiwaliyoow war ma hayee aan kugu soo celiyo.
Cali wuukusoo noqday Cabdiwali,Wuxuuna usheegay Ciidankaan waa Kuwii PMPF-ta booliska badda PUNTLAND,Waxaana agaasime ka ah Maxamed Cabdirahman Faroole oo ah wiilka Madaxweyne Faroole,aniguna waxba kama qaban karo.
Intaas markuu Cali Yiri,ayaa waxaa Khadka Telka kasoo galay dhanka Cali Maxamed Cabdiraxman Faroole oo Cali kuwehelinayay Khadka,Lakin Cali wuu ka qariyay Cabdiwali, Cabdiwali wuxuu Ku yiri Caliyoow Oday ayaad iigu qiimaysnayd Noqonse weyday,khadkiina wuu ka baxay,Cabdiwali masiin Jaanis uu ku hadlo ina Faroole.
Mudo 20 Daqiiqo ah markay arintaas kasoo wareegtay, Arinta Ciidankuna magaalada Bosaso gaartay ayaa waxaa soo galay girigii Cabdiwali deganaa.
1/Cabdisamad Galan-Gudoomiyaha Gabalka Bari.
2/CabdiJamal Wasiir Ku Xigeenka Amniga Puntland.
3/Afdalaw oo ah Taliyaha qaybta Gabalka bari.
Nimankaas odayaasha ah waxay wadeen Warqad ay ku qoran tahay.
1/ Magacyada 12 Qof oo reer bariya oo Cabdiwali lagu Amray inuusan la kulmi karin,Waxaana kamida Liiban Boqor oo Gaas uu deganyahay Gurigiisa.
2/inuusan aadi karin Degmada Badhan.
3/inuu degdeg uga Boxo PUNTLAND.
Cabdiwali wuu ka Murmay arintaas,ugu dambayse wuu ka laabtay Bosaso oo wuxuu aaday gaalkacayo Wuxuuna isugu yeeray Warbaahinta Wuxuuna Siidaayay warkii Dheeraa ee Caanka noqday.
Waxaa Mudan in laxuso Xukuumada Faroole inay Gaas markaas ku eedaynaysay Inuu u yimid Puntland inuu dumiyo,Xamar-na laga soo diray,Marka maanta imaansha Xildhiban Cali Yusuf Ali Xoosh iyo eeda Xukuumadda ee Xamar,iyo Lud hore laqanyadeed,Maxay adiga kula tahay?
Waxaa qoray Rashed SH Ali Xarfo
Muqdisho (Codka Nabadda) Qaramada Midoobay ayaa ka hadashay go’aanka dowladda Soomaaliya ay dalka kaga ceyrisay ...